news | Myanmar Lifestyle Online Store
CALL / VIBER
09 25 44 43 442
iPhone Lightning Port Splitters
Cable / Gadget Organizers
S8 / S8+ Covers
iPhone7/7Plus Covers
S7 / S7 Edge Covers
iPhone6/6Plus Covers
s6 / s6 Edge Covers
MacBook Wrist Sticker
Note FE အသစ်များလား
~~~ ယူနီကုဒျနဲ့ ဖတျမယျဆို
မတော်လို့များ ၊ ရှေ့လမှာ Samsung Note FE ဆိုပြီး တွေ့ရင် ၊ ဟ အသစ် ထင်တယ်လို့ ကောက်မဆွဲနဲ့ဦး ဆရာတို့ …
အဲ့ဒါ Samsung Note7ကို refurbished လုပ်ထားတာလို့ သတင်းထွက်လေရဲ့ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ လ ၊ ၃ လ လောက်က ဘာပွဲဆိုလည်း မသိ (မေ့သွားပြီဗျ) ပွဲမှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု လှုပ်ရှားမှု တက်ကြွသူတွေက ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု မရှိရလေအောင် ပြန်သိမ်းထားတဲ့ Note7တွေကို ဒီတိုင်းမစွန့်ပစ်ပဲ ၊ refurbish / recycle ပြန်လုပ်သင့်တယ်လို့ ထောက်ပြတာနဲ့ ၊ Samsung ကလည်း ပျော်ပျော်ကြီး လက်ခံ လိုက်ပုံပဲ။
ပျော်ပျော်ကြီးဆို ၊ အရင်က မီးထလောင်ပေမယ့် ၊ အခု Samsung က မီးလောင်ရခြင်း အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ စိတ်ချ ရပြီလေဗျာ… ဆိုပါတော့ … 😛 😀
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ အစက Note 7R ဆိုပြီး ထုတ်မယ်လို့ သတင်းထွက်တယ်။ ပြီးတော့ကား Note7ဆိုတာကြီး ပြန်ပါနေရင် နာမည် စီးမှာ စိုးတာ တစ်ကြောင်း ၊ R က refurbished ဆိုတာကြီး ထောက်ပြနေသလို ဖြစ်နေတာက တစ်ကြောင်းကြောင့် Note FE – Fan Edition ဆိုပြီး ပြန်ထွက်လာဦးမယ် ဆုိုပဲဗျ။ ပြောနေကြတာ။
သဘောက Samsung hard core fan တွေ ပြန်သုံးမယ့် Fan Edition ပေါ့ .. ဟက်ဟက် 😀 😛
သတင်းတွေက မသေချာသေးဘူးလေ။ ဟိုတစ်စ ၊ ဒီတစ်စပဲ။ ပြန်ထုတ်ရင် ဘက်ထရီကို weight လျော့ ထားမယ် ၊ ဈေးက တစ်ဝက်ဈေး ဒေါ်လာ ၄၃၀ ဝန်းကျင် ဆိုပဲ … သုံးမယ်ဆိုရင် စောင့်ပေဦးပေါ့ 😀 🙂
ယူနီကုဒျနဲ့ ဖတျမယျဆို …
တကယ်ပြောတာ ၊ နောက်တာမဟုတ်ဘူး။ လက်နဲ့ ညှစ်လို့ တစ်ခုခု ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ ဖုန်းဆိုတာ မရှိသေးဘူး .. ဟုတ် ?? 😛 😀
အခု ရှိပါပြီဗျာ။ HTC က အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ U11 ပါ (ရုတ်တရက်ဆို လူငယ် ဘောအသင်းလိုလို ဘာလိုလို) HTC U11 ကို ကိုင်ပြီး ညှစ်လိုက် ၊ camera app ပွင့်လာမယ် ၊ ထပ်ညှစ်လိုက် … ဟော .. selfie ရိုက်ပေးရော …. ဒါမျိုးမှ အသစ် မခေါ်ရင် ဘာကို အသစ်ခေါ်ကြမတုန်း …. ဟဲဟဲ
U11 ဆိုတဲ့ နာမည်က နည်းနည်ထောက်တယ် ၊ ညှစ်ဖုန်းပဲ ခေါ်ဦးမယ်။
ညှစ်တဲ့ feature ကို HTC က ပထမဆုံး ဖန်းတီးလိုက်တာဆိုရင် ၊ ပြောပြဦးမယ် …..
Android phone ဆိုတာကို HTC က စခဲ့တာတဲ့။ နောက်မှ Samsung တို့ဘာတို့ ဖြစ်လာတာ။ ပြီးတော့ ပန်းသီးဖုန်းတွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ Live Photo လေ ၊ အဲ့ဒါလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်က HTC က Zoe ဆိုပြီး စခဲ့တာလို့ ပြောရင် မယုံရင် ပုံပြင်မှတ် … ဟက်ဟက် 😛 😀
ပြီးတော့ ရှိသေး …. နောက်ကင်မရာ ၂ လုံးနဲ့ dual camera ဆိုတာကြီးက 2014 ခုနှစ်မှာပဲ HTC ရဲ့ One (M8) ထွက်ပြီးမှ ဟိုဖုန်းမှာလည်း ၂ လုံးပြူး ၊ ဒီဖုန်းမှာလည်း ၂ လုံးပြူး ဖြစ်လာကြတာ။ (ဂု U11 ကတော့ ၁ လုံးထဲရယ်)
ဘာလို့ ဒီတစ်ပတ်ဒီလောက်တောင် HTC ကိုညွှန်းနေရတာတုန်းလို့ ပြောရင် … ရင်နာလွန်းလို့ပါဗျာ။
အစစ အရာရာ ထိပ်ဆုံးဆိုပြီး ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ HTC က အခု နှစ်ပိုင်းတွေကြတော့ ဘယ်နား ကျကျန်ခဲ့မှန်း မသိအောင် ကို အဆက်ပြတ်နေခဲ့တာ။ ထုတ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းတွေကလည်း စင်ပေါ်ကနေ ဘယ်မှ မရောက် ၊ ရင်နာစရာ …
HTC ကတော့ မလျော့သောဇွဲနဲ့ နောက်ကျနေတာတွေကို အကြွေးနဲ့ ဆပ်သလား မှတ်ရလောက်အောင် ၊ ကျန်ခဲ့တာတွေ အားလုံးကို နောက်ဖုန်းအတွက်ဆိုတာမချန်တော့ပဲ ဒီ ညှစ်ဖုန်း (U11) တစ်လုံးထဲမှာပဲ သွပ်သွင်းပြီး အခု ဈေးကွက် တင်လာပါပြီဗျာ။
ညှစ်လို့ ရတာပဲလား ဆိုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ၊ ရေစိုခံတယ် ၊ fingerprint ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကြားဖြတ် စဉ်းစားကြည့်တာ waterproof လည်းဖြစ် ၊ ညှစ်လို့လည်း ရတယ်ဆိုတော့ (လျှောက်မတွေးနဲ့) ရေကူးကန်လိုမျိုးမှာ ဘော်ဒါတွေ selfie ဆွဲမယ်ဆိုရင် လက်ရေစိုနေလို့ screen ပေါ် ပွတ်လို့ မရတာမျိုး မရှိတော့ဘူးလေ။ ဖုန်းကို ညှစ်ပြီး ဆွဲရုံပဲ… selfie …. 😛 😀
U11 က ၅.၅ လက်မ screen ၊ 2560 x 1440 resolution ။ Qualcomm ရဲ့ အသစ်စက်စက် Snapdragon 835 processor သုံးထားမယ် ၊4GB RAM ပါမယ် ၊ 64 GB storage ဖြစ်မယ်။ ကင်မရာက 12 megapixel ကို wide aperture နဲ့ fast autofocus ဖြစ်မယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း ကင်မရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ DxO Lab က လောလောဆယ် ထပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ Google Pixel ထက်ကို ၁ မှတ် ပိုပေးပြီး U11 ကို နံပါတ် ၁ ထိပ်ဆုံးမှာ သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။ ဒါလည်း HTC က ကင်မရာမှာလည်း ခေသူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြတာပေါ့လေ။
ထူးခြားဆုံးကတော့ ညှစ်ဖုန်း ရဲ့ အရောင်တွေပဲဗျ။ တခြားဖုန်းတွေလို flat color တွေ မဟုတ်ပဲ နေရောင်ပေါ်လိုက်ပြီး အရောင်တွေပြေး ၊ အရောင်တွေပြောင်းနေမယ့် gangster color တွေကလည်း ခေတ်လူငယ်တွေ အတွက် ဆွဲဆောင်မှု အသစ် ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ မြင်ယောင် မိသေးတယ်လေ …
Headphone ကတော့ USB TypeC နဲ့ ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ သို့ပေမယ့် ၊ ဗူးထဲမှာ ပါလာတဲ့ USonic headphone လေးက active noise cancelling လေးနဲ့ ဆိုတော့ ကြိုက်မယ် ဆိုရင် ကြိုက်ချင်စရာလေးရယ် ..
လောလောဆယ်တော့ ဈေးမသိသေးဘူးဗျ။ ဖတ်မိသလောက်လေး မစားရ တူတူ အညှော်ခံဖို့ လက်တို့လိုက်တယ် ဆိုပါတော့ 😛 😀
Source: Independent, Wired, Forbes, Phone Arena, HTC
အနီရောင်နဲ့ hot ဖြစ်နေတဲ့ S8
~~~ ယူနီကုဒျနဲ့ ဖတျမယျဆို …
အခုလက်ရှိမှာ hot ဖြစ်လွန်းလို့ ယပ်တောင်ခပ်ယူရတယ် ဆိုတဲ့ ဖုန်းက တော့ S8 ဖြစ်မယ်ဗျ။ သဘောရိုးနဲ့ ပြောတာပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ မီးမလောင်တော့ဘူး ၊ တကယ်။ 😛 😀
မီးတော့ မလောင်ပေမယ့် ၊ သူလည်း သူ့နည်းသူဟန်နဲ့တော့ ဂြိုလ်မွှေပြီး ရောက်လာတယ်ဆိုရမှာပဲဗျ။ ကိုးရီးယား နိုင်ငံမှာ pre-order တွေပေးလိုက်တာ အလူးအလဲ ၊ ရပြီ ဆိုလို့ လက်ထဲ ရောက်လာတော့ တချို့ S8 တွေက နီနီရဲရဲ လေးတွေ ၊ ဘက်ထရီမဟုတ်ဘူး ၊ စိတ်မပူနဲ့လေ။ ဒီတစ်ခါတော့ screen ဗျ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေကတည်းက သတင်းက တိုးတိုးလေး ထွက်နှင့်နေပြီ။ အချို့သော S8 တွေရဲ့ screen မှာ အနီရောင် လွန်ကဲနေတဲ့ ပြဿနာ။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ Samsung က ဒီကိစ္စဟာ setting နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့သလိုပဲ ၊ ဒီတစ်ပတ် ထွက်လာတဲ့ သတင်းအရတော့ Samsung က ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် software update ထုတ်ပေးမယ် ဆိုလာတာပါ။
“Because there are some complaints about the red-tinted screens, we decided to upgrade the software next week for all Galaxy S8 clients,” လို့ Korea Herald မှာ Samsung ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူက ပြောဆိုထားတာကို ပြန်ပြောင်း ကောက်နုတ်ပြတာပါဗျာ။ Samsung က ဒီ ပြဿနာကို Settings > Display > Screen Mode > Color Balance မှာ ပြန်ချိန်လည်း ရတယ်လို့လည်း ပြောထားပါသေးတယ်။
ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော့်နည်းတူ ဘဝင် မကျမယ့် သူလည်း ခပ်များများ ရှိမယ်လို့ တွေးမိတယ်ဗျ။ ဘယ့်နယ် ၊ ရှယ် ဆိုမှ ရှယ် ဖုန်းက setting တစ်လုံး တစ်မျိုး နဲ့ ထွက်လာတာတော့ သိပ်မနိမ့်လှပေဘူးပဲ။ ပြီးတော့ ဒါ တကယ်ပဲ software fix နဲ့ ပြေလည်မယ့် ကိစ္စ ဖြစ်လာပါ့မလား။
ဒါကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် မေးခွန်းပါလေ။ သိပ်လည်း မရေးရဲဘူးဗျ။ တရားလာစွဲမှာ စိုးလို့ ၊ ကျွန်တော်တို့ အမိမြေမှတော့ အနီ မများတဲ့ အလုံးတွေ ရကြပါစေဗျာ ၊ နော် 🙂 😀
S8 နဲ့ တွဲမယ့် Dex ၊ အသစ်
Samsung က အသစ်ထွက်မယ့် S8 နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ထူးထူးခြားခြား ဒီပစ္စည်းလေး leak ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဂြိုလ်သားလိုလို ၊ အာကသယာဉ်လိုလို ၊ ဒီ Dex ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းက S8 ကို desktop computer လို အလုပ်လုပ်ပေးအောင် စွမ်းဆောင်ပေးမယ့် ပစ္စည်းလို့ အနောက် ကမ္ဘာက ဆြာကြီး တွေက သုံးသပ်လေရဲ့ဗျ။
သူ့မှာ USB C ပါတယ်။ Full size USB port ၂ ခု ပါတယ် ဆိုတော့ ၊ keyboard နဲ့ mouse နဲ့ တွဲမယ်။ HDMI ပါတော့ monitor နဲ့ တွဲမယ် ၊ တွေးကြည့်တာနဲ့တော့ ဟုတ်နေတာပဲဗျ။ ဒါနဲ့ အပေါ်မှာ ထောင်နေတဲ့ ပန်ကာက ဘာလုပ်ဖို့ ဘာလိမ့်ဆိုတော့ ….. အဟက် ၊ Samsung ဖုန်းကိုးဗျ … သိတယ်မလား…. ဟက်ဟက် … 😛 😀
ဟုတ် ၊ မဟုတ် ကတော့ သိပ်မစောင့်ရတော့ပါဘူးလေ။ မတ် ၃၀ ဆိုရင် S8 ကိုလည်း ချပြတော့မှာ ဆိုတော့ S8 က အပြင်မှာ ဘယ်လို နေတယ် ၊ ဒီ Dex က တကယ်လား ၊ စိတ်ကူးယဉ်လား စသဖြင့် သိရတော့ မှာဆိုတော့ ၊ စောင့်ကြည့် …. 😀 🙂
iPad အသစ် နဲ့ ဘယ် iPad ကို ရွေးလို့ဝယ်
ကဲ ၊ မပြောဘူးလား ၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ် iPad အသစ် ထွက်မှာပါလို့ ။ ဂု.. မှန်ရောမလား ၊ ၉.၇ လက်မ iPad အသစ်ထွက်ပြီ။ Processor အသစ်နဲ့ ….
ဆိုတော့ကား ၊ iPad လို့ ပြောလိုက်ရင် ရွေးစရာတွေက ခပ်များများရယ်နဲ့ ဘယ်အလုံးကို ရွေးရပါ့ ဆိုရင် ၊ welcome to the party. အခု အဲ့လို ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တော့ ပေဘူးပဲကိုးဗျ။
လောလောဆယ် iPad လို့ ပြောလိုက်ရင် ၊ အသစ်ထွက်တဲ့ ၉.၇ လက်မ လေးက ဈေး အတန်ဆုံးပဲ။ သူက ဒေါ်လာ ၃၃၀ ဝန်းကျင်ပဲ။
ကျန်တာတွေက ဆင်လောက်ရှိတဲ့ 12.9 inch iPad Pro ရှိမယ်။ သူက ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ ၈၀၀ ဝန်းကျင်က စမယ် ၊ သူ့ အောက်မှာ 9.7 inch iPad Pro ပဲ ရှိတယ် ။ သူကတော့ ဒေါ်လာ ၆၀၀ လောက်က စမယ်။ ပြီးတော့ အခု ထွက်တဲ့ 9.7 inch iPad က ဒေါ်လာ ၃၃၀ ၊ သူက budget option လေး။ နောက်ဆုံး size သေးလေးမှ ကြိုက်တာ ဆုိုရင်တော့ iPad Mini4က ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဝန်းကျင်က စမယ်ပေါ့လေ။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ Mini ကတောင် ပိုဈေးကြီးနေသေး …
ဆိုတော့ကား အသစ်မှာ ဘာတွေ ထူးလာသလဲ ဆိုရင် ၊ နံပါတ် ၁ က ဈေးနှုန်းပေါ့။ ဒေါ်လာ ၃၃၀ ဝန်းကျင်က စမယ်ဆိုတော့ Budget option လို့တောင် ပြောလုို့ရမယ်။ ဒီ iPad အသစ်က 9.7 inch ကို နောက်ဆုံးထွက် A9 processor နဲ့ ၊ ဓာတ်တုံး က တစ်ခါ အားသွင်းပြီးရင် ၁၀ နာရီ ခံမယ် ၊ ပြောတာပဲ ။ နောက်ကင်မရာက 8 megapixel ၊ ရှေ့က 1.2 megapixel ပါ။
ထွက်ထားတဲ့သတင်းနဲ့ အံမကိုက်တာ ဆိုလို့ speaker ၄ လုံး မဟုတ်ပဲ ၊ ၂ လုံးပဲ ပါလာပါတယ်ဗျာ။ TouchID လေးပါတယ်။ ၃.၅ မီလီ headphone jack လေးနဲ့ပါ။ လက်ရှိ iPad Air2ထက်တော့ မဆိုသလောက်ထူသွားတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ အရင် iPad က 6.1 mm ၊ အခု iPad က 7.5 ဆိုတော့ အနည်းအကျဉ်းပါ။ ပြီးတော့ နည်းနည်းလေးလည်း ပိုလေးသွားတယ်ဆိုပဲဗျ။ ဘယ်လောက် ပိုလေးသွားလည်းတော့ ရှာမတွေ့ဘူးရယ်။
နံပါတ် ၁ ဆွဲဆောင်မှုကတော့ ဈေးနှုန်းပဲ ၊ ဈေးသက်သက်သာသာလေးနဲ့ iPad အသစ်ဆိုရင်တော့ သုံးပေတော့ဗျိုးးး 🙂 😀
အော် ၊ ဒါနဲ့ iPhone SE fan ဆိုရင် ၊ အခု Apple က SE တွေကို storage ၂ ဆ စီ တိုးပြီး အသစ်ထုတ်တယ်ဗျ။ ဈေးကတော့ အရင် အတိုင်းပဲ။ အာ့ပြောပြတာ 😛 😀
S8 က ဒီအရောင်တွေနဲ့ ဆို
~~~~ ယူနီကုဒျနဲ့ ဖတျမယျဆို …
S8 နဲ့ ပတ်သက်လို့ leak တာတွေ များလွန်းလို့ အားလုံးလည်း ဗူးပေါ်သလိုပေါ်နေရောပဲ။ ဒီ တစ်ပတ်မှာတော့ S8 က ဒီလို အရောင်တွေ ပါမယ် ဆိုပြီး ပုံ ထွက်လာလေရဲ့
ပုံကတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်မလား ၊ Tempered Glass လို ရှေ့မှာ ထပ်ကပ်ဖို့ တရုတ်ပြည်က ထုတ်ထားတာတွေလားတော့ မပြောတတ်ဘူးဗျ။ မှန်းဆော်သူတွေကတော့ ဒါ S8 က အရောင်အသစ် ၊ glossy black, white, blue, silver, gold နဲ့ regular black ထုတ်မှာ ဆိုပဲ။
မတ်လ ၂၉ ပွဲကျမှ အဲ့ပုံထဲကဟာတွေက မှန်ကပ် တွေ ဖြစ်နေရင်တော့ ကျွန်တော် မပါဘူးနော်။ ကျွန်တော်က တွေ့တဲ့ပုံလေး ပြန်ပြရင်း ၊ တွေ့တဲ့ သတင်းလေး ပြန်လှော်ပေးရုံ သက်သက် … ဟက်ဟက်… 😛 😀
ဒါနဲ့ S8 က iPhone လို pressure sensitive screen ပါမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း ထွက်သေး ။ ပွဲလည်း နီးပြီ ဆိုတော့ မကြာခင်တော့ အတိအကျ သိရမပေ့ါလေ ၊ နော …. 🙂 😀
Source: TechDroider via Mashable
သင်္ကြန်ကလည်း ၁၀ ရက်လား ၅ လား ၊ ဟိုလိုလို ၊ ဒီလိုလိုနဲ့ ကြားထဲ ၊ သွားမယ်ဆိုတဲ့ အပန်းဖြေ ခရီးက လွတ်မှတော့ မထူးပါဘူးလေ ၊ iPad တစ်လုံးပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုချလိုက်တော့မယ် ဆိုရင် …. ဟိုးးးးးး ဆရာ …
Apple က iPad Pro အသစ် ဒီတစ်ပတ်ထဲ ရောင်းတော့မှာတဲ့ (မရောင်းဖြစ်တော့လည်း ၊ ရှေ့ပတ်မှ iPad ဝယ်လည်း နောက်မကျပါဘူးလေ နော် .. ဟက်ဟက် 😛 😀 )
ပုံမှန်အားဖြင့် ပွဲနဲ့ လန်းနဲ့ ချပြပေမယ့် ၊ ဒီတစ်ခေါက်တော့ Apple က Media Event အစား Press Release နဲ့ပဲ ချပြမယ်လို့ သတင်းထွက်ပါတယ်။ သဘောကတော့ အသစ်ထုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ သတင်းပေးပြီး စရောင်းမှာပေါ့လေ။
သတင်းတွေအရတော့ iPad Pro2က ၉.၇လက်မ ဖြစ်မယ် ၊ speaker ၄ လုံး ဖြစ်မယ် ၊ CPU အသစ်သုံးမယ် စတဲ့ ယေဘုယျကျတဲ့ မှန်းဆော်တွေက လွဲလို့ လောလောဆယ် တော့ ကျန်သတင်းများ မသိရသေးပါကြောင်း 🙂 😀
Note 8, the “Great”
ဒီ တစ်ပတ်ကတော့ Sammy ဖက်ပဲ လှည့်လှည့် ထု သလိုတော့ ဖြစ်နေပြီ။ 😛 😀
Samsung က Note7ကို စိတ်နာပြီး သကာလ ၊ Note 8 ကိုလည်း မထုတ်မဖြစ်ပြန် ၊ ဆက်ထုတ်ရဦးမလေတော့ …. တစ်နှစ်ကျလို့ တစ်ပတ်လည် မကြာခင် Note 8 ကို တွေ့ကြရဦးမှာတော့ အသေအချာပါ။
လောလောဆယ် သတင်းထွက်တာကတော့ Samsung က Note 8 ကို codename “Great” လို့ပေးပြီး လှုပ်ရှားနေပြီတဲ့ ခင်ဗျ။
Model no. ကိုလည်း SM-N950F လို့ ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Note7ရဲ့ နံပါတ်က SM-N930F ဖြစ်ပြီး ၊ Note 8 မှာ 940 မလာရခြင်း အကြောင်းက four ဆိုတဲ့ ဂဏန်းက ကိုးရီးယားမှာ unlucky မို့လိုပါတဲ့ ..
Note7က N940 မဟုတ်တာပဲ တော်သေးတာပေါ့ လို့ ပြောရမယ် ၊ မဟုတ်ရင် ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်ဦးလေမလား … ဟက်ဟက် … 😛 😀
လောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပဲ သိရသေးတယ်ဗျ။ အလုံးအထည်တော့ မတွေ့ရသေးဘူးရယ်။ Note7ကို refurbish ပြန်လုပ်ပြီးရောင်းမယ် ဆိုတာလည်း ခုထိတော့ အကောင်အထည် မဖော်ဖြစ်သေးဘူး ထင်ပါ့။
Samsung က မီးလောင်ရခြင်းကိုလည်း အဖြေရှာတွေ့ပြီး S8 ကလည်း အလန်းစား ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ Note 8 ထွက်လာရင် ရဲရဲကြီး ပြန်ကိုင်လို့ ရလောက်ပါပြီဗျ ၊ နော် … 😀 🙂
S8 leak ပွနျပွီ
~~~ ဇော်ဂျီနဲ့ဖတ်မယ်ဆို …
ကြှနျတျောထငျတယျလေ ၊ ၂၀၁၇ ကို အပိုငျးသိမျးမယျ့ ဖုနျးက Samsung ရဲ့ S8 ဖွဈမလား ပဲ။ မီးမလောငျ ရငျပေါ့ …. ဟကျဟကျ … 😛 😀
ပွောလို့ ပွောတာ မဟုတျဘူးဗြ။ ဒီ S8 က လညျး မီးလောငျတဲ့ ကိစ်စ ကွောငျ့ပဲ ပိုပွီး လူစိတျဝငျစားလာသလို ၊ မီးလောငျလို့ နာမညျ ထိုးကြ နတောကို အဖတျဆယျဖို့ Samsung က အပတျတကုတျ ရကေုနျရခေမျး ကွိုးစား ရငျးနဲ့ပဲ ပိုပွီး ကောငျးတဲ့ ၊ ပုံစံသဈကို ခပြွမယျ့ ဖုနျးတဈလုံး ဖွဈလာမယျ ယူဆတာပဲဗြ။ ဒါကွောငျ့ လညျး ဒီနှဈမှာ သခြောမှ ခပြွမယျ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ နောကျဆုတျလာလိုကျတာ မတျလ ကုနျကိုတောငျ ရောကျရောပဲ။
မတျလ ၂၉ မှာ ခပြွမယျ ၊ ရကျကလညျး နီးလာပွီ ဆိုတော့ ပုံတှလေညျး အပွငျကို leak ထပျ ဖွဈလာတယျဗြ။ ပုံတှကေတော့ အမှနျသာ ဖွဈကွေးဆိုရငျ အလနျးစားပဲ။
ဒီတဈပတျ ထပျထှကျလာတဲ့ leak မှာတော့ S8 ရဲ့ always on display ကို မွငျရတယျဗြ။ ထူးထူးဆနျးဆနျး ဆိုရငျ ဘောငျပြောကျအောငျ လုပျထားတဲ့ S8 ရဲ့ always on display အောကျဖကျမှာ always on home button လို့ပဲ ပွောရမလား ၊ home button ပုံလေး ပျေါနတော တှတေ့ယျ ဟုတျ ???? (အမှုနျတှကေ မှနျကှဲနတောဟုတျဘူး ၊ display က စတိုငျထုတျထားတာ …. 😛 😀 )
သဘောကတော့ အဲ့ဒီ home button လေးကို နှိပျပွီး phone ကို ဖှငျ့လို့ ရမယျ ဆိုပွနျတော့လညျး ၊ တဖကျက ပွနျစဉျးစားကွညျ့ရငျ အဲ့ဒီ always on home button လေးမှာ finger print reader မှ မပါပဲကိုး ။ နောကျဆုံးတော့ အဲ့ ခလုတျလေးကို နှိပျ ၊ ပွီးရငျ ဖုနျးကို မ ၊ နောကျမှာ ပါတဲ့ finger printer reader လေးပျေါ လကျနဲ့ တငျရဦးမှာတော့ မွငျယောငျမိသေး။
အကယျ၍သာ အဲ့လို့ ဖုနျးကို မ ပွီးနှိပျရာမှာက အမှနျဖွဈကွေး ၊ တဈဖကျမှာလညျး Apple ရဲ့ iPhone အသဈမှာ fingerprint reader ကို ရှမှေ့နျအောကျမွုပျထားမယျ ဆိုတဲ့ သတငျးကလညျး အမှနျဖွဈကွေး ဆိုရငျ ဒီ ပှဲမှာတော့ iPhone အသဈက အနိုငျရသှားဦးမှာတော့ သခြောသလောကျရှိနပွေနျပွီလေ။
Fingerprint reader ဆိုလို့ ၊ ပုံတှအေရတော့ S8 အတှကျ fingerprint reader က အနောကျမှာ ၊ အနောကျမှာမှ ၊ Huawei လို့ ကငျမရာအောကျမှာ အဝိုငျးလေး ဆိုရငျ ပိုဖမျးရ လှယျမယျ ထငျပမေယျ့ လညျး ၊ ပွသနာက S8 မှာက အရငျဖုနျးတှမှော ပါပွီးသား heart rate sensor လေးကလညျး ပါသေးတယျ ဆိုတော့ ပုံစံ အရ အဆငျပွအေောငျ ကငျမရာကို ဟိုဖကျ ၊ ဒီဖကျ ညှပျပွီး တဈဖကျမှာ fingerprint reader ၊ တဈဖကျမှာ heart rate sensor ဖွဈမယျဆိုတော့ ၊ ဖုနျးကို unlock လုပျဖို့ fingerprint reader ပျေါ လကျတငျတော့မှ heart rate sensor ပျေါ ရောကျရောကျ နတော အကငျြ့လုပျရဦးမှာတော့ ထပျပွီး မွငျယောငျ မိသား… 😛 😀
လောလောဆယျတော့ မယောငျရာဆီလူး ၊ ဟုတျမဟုတျ သခြော မသိသေးပမေယျ့ ၊ ဟုတျဖို့ကတော့ ၉၀% သခြော နပွေီ ဆိုတဲ့ ဒီပုံလေးတှပေဲ ကွညျ့ပွီး ဘေးထိုငျဘုပွော ၊ ဘဘတို့ အလုပျလုပျရငျးနဲ့ပဲ ….. 😛 😀
Source: Android Authority, Slashleaks
S8 leak ပြန်ပြီ
ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ ၊ ၂၀၁၇ ကို အပိုင်းသိမ်းမယ့် ဖုန်းက Samsung ရဲ့ S8 ဖြစ်မလား ပဲ။ မီးမလောင် ရင်ပေါ့ …. ဟက်ဟက် … 😛 😀
ပြောလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒီ S8 က လည်း မီးလောင်တဲ့ ကိစ္စ ကြောင့်ပဲ ပိုပြီး လူစိတ်ဝင်စားလာသလို ၊ မီးလောင်လို့ နာမည် ထိုးကျ နေတာကို အဖတ်ဆယ်ဖို့ Samsung က အပတ်တကုတ် ရေကုန်ရေခမ်း ကြိုးစား ရင်းနဲ့ပဲ ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ ၊ ပုံစံသစ်ကို ချပြမယ့် ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်လာမယ် ယူဆတာပဲဗျ။ ဒါကြောင့် လည်း ဒီနှစ်မှာ သေချာမှ ချပြမယ် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ နောက်ဆုတ်လာလိုက်တာ မတ်လ ကုန်ကိုတောင် ရောက်ရောပဲ။
မတ်လ ၂၉ မှာ ချပြမယ် ၊ ရက်ကလည်း နီးလာပြီ ဆိုတော့ ပုံတွေလည်း အပြင်ကို leak ထပ် ဖြစ်လာတယ်ဗျ။ ပုံတွေကတော့ အမှန်သာ ဖြစ်ကြေးဆိုရင် အလန်းစားပဲ။
ဒီတစ်ပတ် ထပ်ထွက်လာတဲ့ leak မှာတော့ S8 ရဲ့ always on display ကို မြင်ရတယ်ဗျ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆိုရင် ဘောင်ပျောက်အောင် လုပ်ထားတဲ့ S8 ရဲ့ always on display အောက်ဖက်မှာ always on home button လို့ပဲ ပြောရမလား ၊ home button ပုံလေး ပေါ်နေတာ တွေ့တယ် ဟုတ် ???? (အမှုန်တွေက မှန်ကွဲနေတာဟုတ်ဘူး ၊ display က စတိုင်ထုတ်ထားတာ …. 😛 😀 )
သဘောကတော့ အဲ့ဒီ home button လေးကို နှိပ်ပြီး phone ကို ဖွင့်လို့ ရမယ် ဆိုပြန်တော့လည်း ၊ တဖက်က ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အဲ့ဒီ always on home button လေးမှာ finger print reader မှ မပါပဲကိုး ။ နောက်ဆုံးတော့ အဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ် ၊ ပြီးရင် ဖုန်းကို မ ၊ နောက်မှာ ပါတဲ့ finger printer reader လေးပေါ် လက်နဲ့ တင်ရဦးမှာတော့ မြင်ယောင်မိသေး။
အကယ်၍သာ အဲ့လို့ ဖုန်းကို မ ပြီးနှိပ်ရာမှာက အမှန်ဖြစ်ကြေး ၊ တစ်ဖက်မှာလည်း Apple ရဲ့ iPhone အသစ်မှာ fingerprint reader ကို ရှေ့မှန်အောက်မြုပ်ထားမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကလည်း အမှန်ဖြစ်ကြေး ဆိုရင် ဒီ ပွဲမှာတော့ iPhone အသစ်က အနိုင်ရသွားဦးမှာတော့ သေချာသလောက်ရှိနေပြန်ပြီလေ။
Fingerprint reader ဆိုလို့ ၊ ပုံတွေအရတော့ S8 အတွက် fingerprint reader က အနောက်မှာ ၊ အနောက်မှာမှ ၊ Huawei လို့ ကင်မရာအောက်မှာ အဝိုင်းလေး ဆိုရင် ပိုဖမ်းရ လွယ်မယ် ထင်ပေမယ့် လည်း ၊ ပြသနာက S8 မှာက အရင်ဖုန်းတွေမှာ ပါပြီးသား heart rate sensor လေးကလည်း ပါသေးတယ် ဆိုတော့ ပုံစံ အရ အဆင်ပြေအောင် ကင်မရာကို ဟိုဖက် ၊ ဒီဖက် ညှပ်ပြီး တစ်ဖက်မှာ fingerprint reader ၊ တစ်ဖက်မှာ heart rate sensor ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ၊ ဖုန်းကို unlock လုပ်ဖို့ fingerprint reader ပေါ် လက်တင်တော့မှ heart rate sensor ပေါ် ရောက်ရောက် နေတာ အကျင့်လုပ်ရဦးမှာတော့ ထပ်ပြီး မြင်ယောင် မိသား… 😛 😀
လောလောဆယ်တော့ မယောင်ရာဆီလူး ၊ ဟုတ်မဟုတ် သေချာ မသိသေးပေမယ့် ၊ ဟုတ်ဖို့ကတော့ ၉၀% သေချာ နေပြီ ဆိုတဲ့ ဒီပုံလေးတွေပဲ ကြည့်ပြီး ဘေးထိုင်ဘုပြော ၊ ဘဘတို့ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ….. 😛 😀
Call / Viber - 09 25 44 43 442
Copyright 2017 Myanmar Lifestyle.